Duqa Magaalada İmamoğlu: 'Waan ilaalin doonnaa dhismayaasha taariikhiga ah sida libaaxyada' | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulDuqa Magaalada İmamoğlu: 'Waan ilaalin doonnaa dhismayaasha taariikhiga ah sida libaaxyada'
Madaxweyne Imamoglu wuxuu yeelan doonaa dhismayaal taariikhi ah sida libaaxyo
Madaxweynaha EkBB Ekrem İmamoğlu, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan's Haydarpaşa iyo saldhigyada Sirkeci ayaa ka jawaabaya qandaraaska. Imamoglu wuxuu carabka ku adkeeyay in sawirka laga qaaday xafiiskiisa qofkii helay hindisada uu macno badan sameeyay wuxuuna yiri, “Su’aashaada waad sii badisey. Waxyeelaynta sumcadda TCDD…
Horaanba waad dhaawacday sumcadda TCDD. Illaa iyo hadda waad dhaawacday howlahaaga, shaqadaada iyo shilalka. Laakiin nabarrada weyn Waxaad samaynaysaa nabar weyn adigoo dooranaya inaad siiso labada calaamadaha taariikhiga ah ee TCDD, Sirkeci iyo Haydarpaşa qof, qof aadan aqoon. Waajibkayagu wuxuu noqon doonaa inaan kaa hor istaagno masuuliyad weyn. Ilaa dhamaadka dhismayaashan taariikhiga ah, sida IMM, waxaan u ilaalin doonnaa sidii libaaxyo. Maalin maalmaha kamid ah waad ceeboobi doontaa. Taas waad ceeboobi doontaa, Mudane Wasiir.
Madaxweynaha Dawladda Hoose ee Istambul (IMM) Madaxweynaha Ekrem Imamoglu, jawaabta dadweynaha ee xarumaha Haydarpasa iyo Sirkeci, Mehmet Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha ayaa bayaan ay soo saareen ku qanciyay hindise. Bas Inc. iyo Xarunta Ganacsiga Dunida Imamoglu, oo kaamirooyinka ku arkay Agaasinka Guud, ayaa jawaab ka bixiyay ereyadan soo socda:
“MA TAHAY? MA SAMEEYAAN? ”
“Ilaa xalay, waxaan u arkay inay muhiim tahay inaan la wadaago aragtidayda iyo fikradayda ku saabsan bayaankan adiga iyo dadkeenaba, gaar ahaan muwaaddiniinta Istanbul. Statements Mr. Wasiirka sameeyey shalay, iyo nasiib darro waxa xanuun, ayuu wuxuu u yeelay qareenka shirkada koobin ee loo yaqaano ee, Wasiirka Jamhuuriyadda Turkey ayaa iga dhigay, Waxaan fahamsanahay. Ma aanan arkin farqi. Garyaqaan ayaa difaaci kara milkiilaha shirkaddan oo ay hindisu u ahayd hadiyad. Laakiin waxyaalaha difaaca noocaas ah waa la daabici karaa. Markii aan aqriyay qoraalka, 'Ma hubtaa? Tani waa tilmaanta 'Waxaan u baahanahay inaan weydiiyo. Waan ka xumahay. Waan ka xumahay oo ka wakiil ah Jamhuuriyadda Turkey. Marka hore, Bayaanka ay soo saareen Lataliyaha Saxaafadda iyo bayaankii xigey, haddii ay tahay muujinta tooska ah ee Wasiirka, waa ceeb weyn iyo taariikh. Wasaaraddu waxay u dhigantaa qareenka muwaadinka, waan ka xumahay. Wuxuu ku kacay qalad.
SHARAXAADA "PAIN PAIN PATMI"
Ası Waa qayb muhiim ah oo su'aal ah in xitaa shirkad aan lahayn degel websaydh ah oo leh raasamaal ah 10 kun oo rodol ay ka dhigatay koror raasamaal ah oo ah 1 milyan oo rodol maalin ka hor maalinta casuumadda labaad markii la qaabilayay qandaraaska. Calaamadee noocee ah ayuu helay? Sidee ayuu digniin u helay? Sidee ayuu dareemay baahidaas? Waxaan u arkaa 15 inay tahay caddeyn qiimo leh inta lagu gudajiray maalinta oo waxaan rabaa inaan soo jiito dareenka muwaadiniintayada mowduucan. Waad ogtahay, marwalba waan kuu sheegay; cufan oo dad ah. Qoraalkan, Wasiirka wuxuu doortay inuu is garab taago tiro dad ah, oo aan ahayn 16 milyan oo reer Istanbul ah. Waa sharraxaad aad u qadhaadh. Waa maxay? Sir, 4 waxay leedahay xaalad sameynta malaayiin rodol! Eebbe awgood; halkan waxaan ka hadlaynaa oo keliya Kültür A.Ş. Waxaa jira isku xiraha shirkadda 254, afartaasna waxaa iska leh shirkadda hoos timaadda dowladda, IMM. Midkood oo keliya ayaa leh 4 milyan oo rodol oo waayo-aragnimo shaqo ah. Waxaad ka hadlaysaa khibrad shaqo ama cudurdaar kale. ”
“WASIIRKA AY U SAMEEYAAN MAGAALADA MAGAALADAAN MA KARA KARAAN!”
"Markaa haddii aad arki lahayd: 'Qof ayaa siiyay 100 kun TL, kan kalena wuxuu siiyay 350 kun TL!' Wasiir, habkan, wuxuu ku bixiyay lacag aad u badan. Hindisada waxaa la siiyay 'sharraxaadda… taas oo qalad ah. Taasi run ma aha. Maxay run u ahayn? Xitaa namaadan casuumin gorgortanka labaad. Waxaad ku sharraxaysaa hindisada marxaladaha 2; Marxaladda koowaad ee aad heshid ayaa ah, marxaladda labaad qofna ma garanayo halka loo maro gorgortankaas. Weedho badan oo been abuur ah, 'lacag badan' iyo wixii la mid ah oo odhaahdaas la sameeyo; Maxaa dhiirigelin ah? Waxaan ahay xanaaqsan. Qofka loo magacaabay wasiirka dalkan ma odhan karo sidan. Tani macquul ma aha. ”
“MA OGTAHAY IN AAD U NAHAY IN AAD UGU QANACSANID”
Ma doonayo inaan ku dhawaaqo ereyada Wasiirka halkan; laakiin waxaa jira jumlad muhiim ah: 'Maxay IMMoMMlu u carqaladeyneysaa xaqiiqda ah inay jiraan kumanaan jeer baaxadda goobahan gacanta ugu jirta IMM halka goobo dhaqan iyo farshaxan oo casri ah loo dhisi doono si loogu faa iideeyo bulshada qaybaha maaddooyinka. " Ilaahow ha iloobo! Mudane wasiir, ma taqaanaa mashruuca? Mashaariicda wali ma jiraan. Qandaraaskan miyaa ku tusay mashruuca? Dhaqan casri ah iyo goob farshaxan…? Sideed ku ogaatay Miyuusan ku tusin qaab dhismeedka? Waan yaabay. Sidee kalsooni ku dheehan tahay, sida ugufiican ugana warqabaan shirkadda eey ku guuleystaan ​​qandaraaskan; Waad og tahay! Xanuun badan; Iz Waxaad leedahay kumanaan kun jeer oo ka weyn meelahaan… Sidoo Mudane Wasiir, ma dareemi kareyn Istanbul. Turkey haatan uu shaki sida in aad dareento. Waxaan ka hadlaynaa laba meelood oo qiimo leh oo ku yaal Istanbul. Mid waa Haydarpaşa kan kalena waa Sirkeci. Si kale haddii loo dhigo, waxaan ka hadlaynaa laba aag oo sumcad leh oo calaamad u ah taariikhda magaaladan iyo dalkan in kabadan qarni. Waad kacday, 'Maxaad qaylo u samaynaysaa? Waxaad gacanta ku haysaa kumanaan aag… qaab dhismeed casri ah ayaa la dhisi doonaa 'waxaad leedahay.'
“WUXUU KA SAMEEYSA MAGACA SAXIIXA sawir-qaade AN
“Hada Wasiirkaasi micno buu u yeeshay sawirka! Sawirkii aad ka soo qaadday xafiiskaaga ayaa noqotay mid macno badan leh. Su'aalaha waad ka sii ballaadhisay. Sida iska cad, 16 waxay diiradda saari doontaa dhaqanka iyo farshaxannimada magaaladan iyada oo ah dhiirigelin ka wakiil ah malaayiin dad ah, qof, tiro dad ah, oo aan hubin, garan mayno waxay tahay inaan sameeyo… Ma aqaan. Laga yaabee inaad tan ka sii yaqaanaan. Su’aashaa kor u qaadaysaa. Kacsanaantaada taas waxay dhaawaceysaa sumcadda TCDD. Horaanba waad dhaawacday sumcadda TCDD. Illaa iyo hada waad dhaawacday howlahaaga, shaqadaada iyo shilalka. Laakiin waxaad sameyneysaa burburka weyn adigoo isku dayaya inaad doorbido labada calaamadaha taariikheed ee TCDD, Sirkeci iyo Haydarpaşa qof, qof aadan aqoon. Waajibkayagu wuxuu noqon doonaa inaan kaa hor istaagno masuuliyad weyn. Ilaa dhamaadka dhismayaashan taariikhiga ah, sida IMM, waxaan u ilaalin doonnaa sidii libaaxyo. Oo maalin uun waad ceeboobi doontaa. Waad ceeboobi doontaa tan, Mudane. ”
AMAAN WAAN KU XIGSANAYNAA IN LAGU SAMEEYO Muuqaalka Maanka Maalintii ”
"Waxaan, xukunka Jamhuuriyadda Turkey, waxaan rajaynayaa caddaaladda. Waxaan dalbanay 16 milyan oo qof. Waxaan raaci doonnaa daqiiqad kasta oo arjigaan ah annaga oo ku hadlaya magaca milyan ee 16 milyan. Waxaan raadin doonaa xuquuqdeena sharciga ah oo dhan. xuquuqda sharciga ah marka raadinta, sida soo socota waxa Wasiirka Mr. ku xusan, midnimada qaranka Turkey iyo taariikhda barbaro aynu u baahan tahay, maado fudud, meel taariikhi ah ku siin karaan in ay hay'ad kale oo dawladda ah hay'adda dadweynaha by bixinta haystaa sacab muggiis oo dadka sidan, Mudane wasiir, waxaan kugu cambaaraynaynaa inaad ku kacday ficil ka dhan ah ruuxa howshan diimeed iyo kan qaran. Adigu dhinaca kale Waan ku xukumay. Waxaad ku dhex mari kartaa howshan nidaam aad u wanaagsan, aadam aad u wanaagsan, qaran ahaan aad iyo aad u diimeed. Waxaan isku dayay inaan ku siiyo fursad, laakiin waad ku guuldareysatay. Sababta oo ah waxaad leedahay dhiirigelin kale. Ma fahmin, laakiin maalin uun way soo bixi doontaa. Waad ogtahay waxa aad qalad sameynayso. Waxaan rajeynayaa in garsoorku sidan saxi doono aadna aad u ceeboobi doontaa. ”
"SHARCIGA FARSAMADA EE DIIWAANGELINTAADA IYO DARYEELKAAGA"
Imamoglu, ka dib wuxuu ka jawaabay su’aalo xubnaha saxaafadda. Su’aalaha uu weydiiyay Imamoglu iyo jawaabihii uu siiyay Madaxweynaha IMM waxay ahaayeen sida soo socota:
Qoraalka qoraalka ah ee aad soo saartay ka dib markii laga mamnuucay hindise-bixiyeyaasha saldhigyada, waxaa sidoo kale jira eedeymo ah u cagajugleynta dadka reer Istanbul iyo xoogsheegashada… ”
The Republic of Turkey waa gobol ka mid ah sharciga, waxa sharciga oo ku baaqay in xaq u leeyahay inuu sax ah waa waxaan ahay mid ka mid ah aad bay u taqaan. War shalay, liddi ku ah sharciga, lid ku ah madaxtinimada iyo run ahaantii waxaa jira wax badan xun ee dareenka ah in weedho lid ku ah nidaamka maamul iyo kan dhaqaale ee Turkey. Isaga ayaa ah kan bulshada ku kicinaya aragtidiisa iyo sharraxaaddiisa; laakiin dadka reer Istanbul way caqli badan yihiin oo garanayaan inay ogaan doonaan xuquuqdooda si buuxda. Sharciga ayaan u kacnaa, waxaan rabnaa xaqeena. Mar labaad, Mudane wasiir, waxaan kugu casuumay inaad wasiir noqoto mar labaad. Waxaan rajeynayaa inaad saxdo khaladaadkaaga. Si aad u hesho sumcaddaada iyo shaqadaada gaarka ah.
YOUZ MA OGAADID!
"Markhaatigiisa, wasiirku wuxuu leeyahay, 'Aan bixinno shirkad wadaag ah oo siinaysa 350 kun TL bedelkii aan siin lahayn 100 kun TL, sharci ahaan maahan," ayuu yidhi. Tiradaas oo kale ma jirtaa? ”
Marka hore, waxaad helaysaa dalab baqshad xidhan. Hal dhinac 100 kun oo kun, dhinaca kale wuxuu siiyay 300 kun oo rodol. Bal eeg, aynu iska dhigno dhammaan dhinacyada anshaxa iyo akhlaaqda. Ka soo qaad inaad kujirto wax hindise ah. Waxaad dhahdeen, 'Waan ka wada xaajoon doonaa qaybta labaad.' Ima soo wicin! Waxaad mamnuucday 16 milyan oo qof, IMM. Ninkii keligiis ayuu galay. Ma ogtahay waxa meesha ka jira? Ma lagu casuumay? Ma taqaanaa wax? 'Input iyo 350 waxay siisay kun rodol!' Qabso hawlgalka hal mar. Waxaad naga maqasheen in nala mamnuucay. Waxaan ka fal celinay sida ugu dhaqsaha badan markaan helno dukumiintiga. Shaqadii waa dhamaatay. Xitaa laguma casuumin. Horaa loo mamnuucay. Waxa jira calaamado su’aal oo aad u qoto dheer oo aad u fiirsato hadalada wasiirka. Waa wax laga xumaado. Wasiirka ayaa ka naxay shaqadiisa oo dhan. Aad u xanuun badan. Shaqadaada oo dhan.
KU SAMEE SI AY SIYAASADA UGU DAMBEEYAAN SI XAALADAHA FARSAMADA ”
Mı Miyaad codsan doontaa kulan Wasiirka? ”
- Maxaan u codsanayaa kulan aan la yeesho wasiirka? Xoghayuhu wuxuu jeclaan lahaa inuu i arko. Wuxuu doonayaa inuu i arko si aan u saxo khaladaadkiisa oo dhan. Maalintii aan go’aansaday, waxaan is idhi, 'Waxaan geli doonnaa saaxiibo waxaanan u qaadanaynaa meeshan anigoo ku hadlaya magaca Istanbul', markii aan u soo baxay dhiirigelin weyn oo aan bayaan ka soo saaray la-tashiga saxaafadda, 'Ma geli kartid tan'. Markaa ceeb. Maxaan ugu wacayaa Wasiirka? Waannu galnaa, oo aannu is nidhi. Aynu arki karno haddii uu soo wacayo oo uu noo sheego sababta aynaan geli karin. Waa inuu kuu sheegaa. Sidaa daraadeed, waxaan ahay duqa magaalada IMM ee loo doortay 16 milyan oo qof. Dareenkaas, waxaan arki doonaa qof walba marxaladan ka dib. Waan ku soo wacayaa, dabcan; si loo saxo qaladka.
"AAMIIN MA AHA IN AAD KA MID AH GUURSADAHA"
Waxaadz Waxaad dhahdaa ma fahmin dhiira gelinta. Xisbiga talada haya wuxuu xaflado badan ku qabtay Istanbul. Xarunta Haliç Congress, Lütfü Kırdar iwm. Laakiin meelahan waxay u gudbeen IMM. Ma jiri kartaa dhiirigelin noocan oo kale ah si loo qabto nashaadaadka dhinacyada Anatolian iyo Yurub? Maxay kula tahay
The Republic of Turkey ma aha xisbi gobol, ma degmooyinka xisbiga ee IMM ah. Dhammaan goobaheena, ficilada xisbiyada siyaasadeed, dhacdooyinka ama banaanbaxyada, dhammaan meelaha Xisbiga Dadweynaha Jamhuurigu uu ugu furan yahay Xisbiga Caddaaladda iyo Horumarka, markaa waa u furan yahay Xisbiga. Muddadoodu way dhammaatay. Farqigaas ayaa ku jiray waqtigoodii. Hadda ma ahan. Waxaan u furi karnaa meel kasta oo ay doonaan. Haddii uu walwal qabo, ha walwelin.
ORUM Waxaan rajeynayaa in qof kale uu qorey qoraalkaan ”
Mı Ma leedahay dib-u-fiirin dib-u-fiirin ah? Waa laga saaray degmada markii ay kujirtey xaalad jilicsan hadana waxay dhiibtay markii ay jirto hindise waa la siin karaa… ”
Sida iska cad waxaan u baahanahay inaan su'aal galiyo hada waa ixtiraam su'aashan. Waxaan ubaahanahay inaan si buuxda u eegno. Waxaan su’aalo badan weydiineynaa, laakiin kani waa sadar gaar ah. Marka hadda waxaan eegi doonaa codsiyadii hore. Waad saxantahay, waa inaan fadhiisnaa oo aan eegnaa su’aashan si sax ah. IBB, meelaha qaarkood oo ay tahay inay kujiraan dadweynaha, maysan dan ka lahayn wax-qabadyadii hore? Miyuu sii daayay? Isna dan kama gelin, sidaa darteed wuu u gudbiyay dadka kale? Eeg, kama hadlayo Ekrem İmamoğlu, kama hadlayo saaxiib. 16 milyan oo qof ayaa dareemaya dareenka taariikhiga ah ee Sirkeci iyo Haydarpaşa… Way qoslayaan haddaad tan u sheegto adduunka. Xishood, dembi. Sideed ugu doodi kartaa taas? Waa kuma, Ilaah aawadiis? 10, oo xitaa qofna uusan garaneyn illaa shalay, xitaa ma leh degel internet, oo leh raasamaal gaaraya kun ginni, taasi waa qofka ugu calaamadda badan adduunka, kaliya maahan Istanbul. , astaan ​​u ah daqiiqado badan. saldhigga tareen Sirkeci, dhammaan Thrace, ina Al-Fatiha Turkiga waxaa ka soo, oo aad qaadi waxay astaan ​​socdaalka Sirkeci ee dalkiisa magangalyo, ugu majaajiloodeen, habka, qofka laga helo dareen sida war toy ilmaha, aad tahay qof qareen ah si ay u bixiyaan haystaa sacab muggiis oo dadka ama. Taasi way fududahay. In badan oo qaran, waxaad tiraahdaa muddo, markaa qaran, waa inaan wada jirno muddada aad fiirineyso fududeynta. Waxaad dadka ku leedahay raaligelin. Horey ayaan u leeyahay, waxaan fursad siiyaa Wasiirka marar badan kahor inta masuuliyiinta sare aysan howshan qaban. Mar labaad ayaan fursad kuu siinayaa. Khalad u leexo Waxaan rajeynayaa in qof kale qoray qoraalkaan. Waad raali galineysaa, waad soo noqotaa. Waxaan rajeynayaa inaad hagaajiso ka hor intaadan u gudbin masuuliyiinta ugu sareysa. Waxaan u malaynayaa in dad badan oo ka tirsan golahaaga iyo xisbigaaga ay ka xishoon jireen ereyadaada. Waxaan dareemayaa
Liinaha Faransiiska-Ödemiş Oo Loogu Qalqaaliyey Gawaarida Heerka Joogta 3 Injured
Adduunyada by majaladda Forbes; sida safka ugu dheer ee leh aragtida ugu quruxda badan…
Dhismayaasha taariikhiga ah ee TCDD ee Ereğlide
Musharixiinta Madaxweynenimada Mudane:
Duqa Magaalada Immayoglu: 'Waxaanu qaban doonaa shaqooyin iyo talooyin ku saabsan gaadiidka biriijka'
Madaxwayne Imamogaan wuxuu raacay gawaarida; Dhageysiga Dhibaatooyinka Muwaadiniinta
Haydarpaşa Tareenka Tareenka
Qandaraaska xarumaha Haydarpaşa iyo Sirkeci
Saldhigga Tareenka ee Sirkeci